June 2012 ~ The Ahmadi Post : Myanmar
ဇီယွန်သမိုင်းမှ မွတ်စလင်မ်များ၏ အစိတ်အပိုင်း
ဘုရားရှင်ထံတော်ပါးမှ ဆုတောင်းခံခြင်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ယူခြင်းက ဇီယွန်သမိုင်းမှာ အငြင်းအခုံ အဖြစ် ရှိနေဆဲပါ။
By Lisa Black, Chicago Tribune reporter June 24, 2012
အဟ်မဒ်သခင်နှင့် ဒိုဝီတို့၏ Prayer Duel တွင် အဟ်မဒ်သခင်(အ) ဘက်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်း အကြောင်းကို အမေရိကန် သတင်းစာတစ်စောင်၌ ဖော်ပြထားစဉ်
အမေရိကန်နိုင်ငံက ဇီယွန်မြို့တော်ကို ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ မိမိကိုယ်ကို ခရစ်ယာန်ဝါဒအတွက် ကောင်းကင်ယံမှ ကြွလာတဲ့ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ ဂျွန်အလက် ဇန္ဒါးဒိုဝီက တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့ရဲ့ မြေနေရာ၊ စာသင်ကျောင်းများနဲ့ လူမှုရေးဌာန များ စတဲ့ အရာအားလုံးဟာ ဒိုဝီရဲ့ ချာခ်ျကျောင်းကနေ အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါ ချာခ်ျကျောင်းများရဲ့ ဩဇာအာဏာပိုမိုကြီးထွားလာတော့ အစိုးရက သာသနာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးကို ခွဲခြားပြစ်ဖို့ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒိုဝီရဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဟာ အိန္ဒိယက မွတ်စလင်မ် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၀၂ မှာတော့ အဲဒီမွတ်စလင်မ်ခေါင်း ဆောင်က ဒိုဝီရဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ် ကျူးလွန်စော်ကားမှုများအတွက် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါး မှာ တောင်းဆုပြုခြင်းအားဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ခံယူရန် ဒိုဝီကို ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာထဲမှာ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုအသင်းကြီးအား တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဟာဇရသ်မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ် (အ)က ဒိုဝီထံ စာနှစ်ကြိမ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဇီယွန် မြို့မှ ခရစ်ယာန်သာသနာပိုင် ဒိုဝီက ပိုပြီး စိတ်ဓာတ်အားမာန်တွေ ခက်ထန်လာကာ သူ၏အပတ်စဉ် ထုတ် နိုင်ငံတကာစာစောင် "Leaves of Healing" မှာ တန်ပြန်ရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။
အဟ်မဒ်သခင်က မိမိသည် မဆီဟ်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒိုဝီကလည်း သူ့အနေဖြင့် ဘုရားထံမှ စေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့ တမန်တော် အီလီးယားစ်(Elijah the Restorer) ဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။
အတိုချုပ်ရရင်တော့ ဒိုဝီရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၀၇ ခုနှစ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစွာ သေဆုံးခဲ့သလို သူရဲ့ ချာခ်ျကလည်း သူ့ကို ထုတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီကတည်းကစပြီး အဟ်မဒ်သခင်ရဲ့ နောက်လိုက်အဟ်မဒီများဟာ မိမိတို့ရဲ့ စာအုပ်စာတမ်းငယ် များမှာ ဒိုဝီရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုကို ဖော်ပြကြပြီး အဟ်မဒ်သခင်ဟာ ယနေ့ခေတ်ကာလအတွက် ပွင့်ပေါ်လာတဲ့ ဘုရားရှင်ထံတော်ပါးမှ ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
"ဘုရားရှင်ထံတော်ပါးမှ ဆုတောင်းခံခြင်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ်ယူခြင်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်သူတွေလို ဖြစ်လာရင် ထွက်ပေါက်ရယူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ မိမိရင်ဆိုင်ရတဲ့ တခြားတစ် ဘက်က ဘုရားရှင်ဘက်က လူသားဖြစ်ရင်တော့ မိမိအနေနဲ့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ရဲ့ ရန်သူရဲ့ အဆင့်မျိုးနဲ့ ညီမျှနေပြီဆိုတာ (သဘောပေါက်ရပါမယ်)။ ဒိုဝီရဲ့ လွဲမှားမှုကို ဘုရားရှင်ရဲ့ လက်တော် က တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သူရဲ့ အဆုံးသတ်ကို ကမ္ဘာပြည်သူလူထုရဲ့ အတွေးအထင်တွေပေါင်းစု ကိုယ်စားပြုဆုံးဖြတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ တရားသဖြင့်အဆုံး အဖြတ် ခံယူနိုင်ပါတယ်။" လို့ လိတ်ကောင်တီ၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်း ရေးမှူးဖြစ်သူ နာဆီရ်ရွတ်ဒင်းရှမ့်စ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဟ်မဒီယာအသင်းက ဇီယွန်မြို့မှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်တစ်လုံးကို ၁၉၈၂ မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင် ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသင်းသားများက ဒိုဝီရဲ့သမိုင်းဝင်နေအိမ်ရှိရာကို မကြာခဏ လာရောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ (အဟ်မဒီများ)ဟာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေထိုင်သူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ စိတ်သဘောထား ပြည့်၀သူများဖြစ်ပြီး ဇီယွန်မြို့ရဲ့ စည်ပင်သာယာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ကူညီကြကြောင်း မြို့တော်ကော်မစ်ရှင်နာဖြစ်သူ ရှန်တန်တေလာက ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ မှာ အဖွဲ့ခွဲများရှိတဲ့ အဟ်မဒီများဟာ မကြာသေးမီက ငြိမ်းချမ်းရေးမြှင့် တင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဒိုဝီကိစ္စကို အခြေခံကာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်မြို့က သမိုင်းသုတေသီတွေကတော့ ဒိုဝီကို စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အဟ်မဒ်သခင်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကတော့ တဘက်သတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုစိန်ခေါ်မှုကို ဒိုဝီက လျစ်လျူပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
" ဒိုဝီက ဒီ(စိန်ခေါ်မှု) ကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ Leaves of Healing မှာ ဒိုဝီက မှတ်ချက်တစ်ခုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ (အဲဒီမှာ) ဒိုဝီက ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို အမည်မဖော်ပြထားပါဘူး၊ ခင်ဗျားက ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့လည်း၊ (ဒိုဝီရည်ညွှန်းခဲ့သူ) က ဘယ်သူဆိုတာလဲ ခင်ဗျားသိလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး" ဟု ဇီယွန်သမိုင်းဆိုစိုက်တီမှ တင်မ်မော်ဆေးက ဆိုပါတယ်။
မော်ဆေးက အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်များ တင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး "အချက် အလက် အများကြီးက တော်တော်လေး မှန်ကန်ပါတယ်။ သူတို့ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ် ခံယူတဲ့နေရာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့က နည်းလမ်းအသွယ်အသွယ် ကွဲကုန်ကြတာပါ" ဟု ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၂
ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ ဝက်စ်ဘန့်ခ်၌ တည်ရှိသော ဝက်စ်ဘန့်ခ်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် မှာ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်သတင်းစာက တင်ပြသည်။
ဝက်စ်ဘန့်ခ်မှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ဗလီကျောင်းနံရံတွင် ဟီဗရူးဘာသာစကားဖြင့် စစ်ကြေငြာခြင်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူများက ရေးသားထားခဲ့သည်။
ဝက်စ်ဘန့်နယ်နိမိတ်အနီး အုလ်ပါနာအရပ်တွင် ဂျူးမိသားစုများက အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသည့် မိမိတို့နေအိမ်များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းမပြုမီ ယင်းဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဗလီဝတ်ကျောင်း တော်၏နံရံတွင် အုလ်ပါနာအတွက်စစ်ကြေငြာခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည့် သတိပေးစာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူများက ရေးခြစ်သွားခဲ့သည်။
တာဝန်ရှိရဲများ၏ ပြောဆိုမှုအရ ဤသည် ၁၈ လအတွင်း ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များကို စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အုလ်ပါနာတွင် အခြေချနေထိုင်လာသည့် အစွန်းရောက်များ၏ price tag လှုပ်ရှားမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အုလ်ပါနာမှ ဂျူးတို့ရွှေ့ပြောင်းပေးရေးမှာ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုလက်ထက်တွင် သော့ချက် ကျသည့် စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ နာတန်ယာဟုကမူ ဗလီကျောင်းအားတိုက်ခိုက်မှုကို ရည်ညွှန်း ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုမပြုနိုင်သည့် လုပ်ရပ်နှင့် တာဝန်သိတတ်မှုကင်းသော ဥပဒေ မဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ရှုံ့ချပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၎င်းအစိုးရအနေဖြင့် ထိုအမှုအား တရားမျှတစွာ စီရင်ဖို့ အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ မစ်ကီရိုဆန်ဖဲလ်ဆိုသည့် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကမူ ဂျေရုစလင်နှင့် ရာမာလာတို့မှ ငါးမိုင်စီကွာဝေးသော လူပေါင်း ၄၂၀၀ ခန့်နေထိုင်သည့် ပါလစ္စတိုင်းရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့် ဂျဗားမှ သံသယဖြစ်ဖွယ် လူအများအပြားဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်း၊ အင်္ဂါနေ့ စောစောပိုင်းက ဗလီတံခါးမကြီးကို ချိုးဖျက်ခဲ့ပြီး ဗလီကို မီးရှို့သဖြင့် ကောဇောများနှင့် ဗလီနံရံများ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ဗလီအပြင်ဘက်တွင်မူ ပြတင်းပေါက်လက်ယာဘက်၌ အုလ်ပါနာစစ်ပွဲဟု ရေးသားထားပြီး ဝဲဘက်တွင်မူ price tag ဟုရေးသားထား ကြောင်း၊ သို့ရေးသားခြင်းမှာ ဗလီကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ဂျူးများရွှေ့ ပြောင်းပေးရခြင်းအတွက် ကလဲ့စားချေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုရာရောက်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျဗားရွာ၏ အကြီးဆုံးဗလီဝတ်ကျောင်းအဖြစ် ဗလီအသေးတစ်လုံးအစား အသုံးပြုရန် လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ကမှ ဆောက်လုပ်ထားသော ယင်းဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ရှိ အဝါရောင် မီနာရာစက်ဝန်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်သူများအတွက် အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည့် အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုဗလီမှာ အုလ်ပါနာတွင်နေထိုင်သော ဂျူးများနှင့် ၈ မိုင်ခန့်ဝေးကြောင်း၊ မနက်စောစောပိုင်း ၁.၃၀ ခန့်တွင် ဗလီထဲမှ မီးတောက်များမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး တံခါးမကြီးလည်း ကျိုးပျက်နေကြောင်း ဂျဗားမြို့ခံ များက ပြောကြားသည်။ အစ္စရေးရဲများ ထိုနေရာသို့ မနက် ၆ နာရီတွင် ရောက်ရှိလာကြောင်း ရိုဆန်ဖဲလ်က ပြောကြားသည်။
ဂျဗားမြို့တော်ဝန် အဗ္ဗဒွလ် ကရီမ်ဘရှာရတ်ကမူ သူအုပ်ချုပ်နေရသည့် နယ်ပယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းသော ဒေသဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဗလီကိုဖျက်ဆီးသူများအား ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ "ဒီတစ်ကြိမ်တော့ မီးကိုနိုင်ကို ထိန်းလိုက်နိုင်တယ်။ ဒီကိစ္စအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ သူတို့ ဒီထက်ဆိုး တာတွေလုပ်နိုင်သေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက အန္တရာယ် ထဲမှာပါ။" ဟု ဘရှာရတ်က ပြောကြားသည်။
အခြေချနေထိုင်သူများ၏ ရီရှကောင်စီအကြီးအကဲ ဒါနီ ဒရန်ကမူ အစွန်းရောက်နေထိုင်သူများ များပြား လာခြင်းကို မည်သူမျှထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုအစွန်း ရောက် နေထိုင်သူများကပင် ယခုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသည့်ကိစ္စ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ် အရင်းအမြစ်ဖြစ် ကြောင်း၊ ဝတ်ပြု ရာနေရာကို မီးရှို့ခြင်းမှာ စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျမှုဖြစ် ကြောင်းလည်း သူက အစ္စရေးရေဒီယိုသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေ တကယ်ပဲ ကုရ်အာန်ကို ဖတ်ကြပါရဲ့လား ?
ရမ္မဇန်လမြတ် ကျရောက်လာပါတော့မယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေကတော့ ဥပုသ်သီလဆောက် တည်ခြင်း၊ အလှူဒါနနဲ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ဒါပြင် အစ္စလာမ်မိုဖိုးဘီးယားခေါ် အစ္စလာမ် ကြောက်ရောဂါကိုလည်း တိုက်ဖျက်ပြစ်ရပါမယ်။ နော်ဝေအကြမ်းဖက်သမား အန်ဒါးစ် ဘာရင်း ဘရိုင်းဗစ်ကတော့ ဒေါသအမျက်ကိုအခြေခံပြီး အပြစ်မဲ့လူပေါင်း ၇၆ ဦးကို အစ္စလာမ် ကိုချေမှုန်းရေး ဆိုပြီး သတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူရွှင်တော် ဘီလ်မဟာရ်ကတော့ ကုရ်အာန်ကို အမုန်း တရားတွေပြည့်နေ တဲ့ကျမ်းစာလို့ မကြာသေးမီက သမုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာမဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဘာသာ တရားမဲ့သူများဖြစ် အောင် ဖျောင်းဖျပြောဆိုသူ ဧဝံဂေလိ၊ ဆမ်ဟဲရစ်ကတော့ ကုရ်အာန်ရဲ့ စာမျက်နှာတိုင်းလိုလိုဟာ လိုက်နာကျင့်သုံးသူမွတ်စလင်မ်များကို မယုံကြည်သူများအပေါ် ခက်ထန်စွာ မုန်းတီးဖို့ ညွှန်ကြားနေ တယ် လို့ ဖိအားပေးပြောကြားနေပါတယ်။ ပီတာကင်းဆိုတဲ့လူကလည်း ၂၁ ရာစုရဲ့ ဆီးနိတ်အမတ် မက္ကာသီလိုဖြစ်ဖို့ အန္တီမွတ်စလင်မ်လှုပ်ရှားမှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲပါ။
လစ်ဗျားကလေးများ လမြတ်ရမ်ဇန်၌ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ​လေ့လာနေကြစဉ်။ Saturday, Aug. 6, 2011. (Sergey Ponomarev - AP)
ဒီလူထုအခမ်းအနားတစ်ခုကို ကျွန်တော်မေ့လျော့နေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်က မေးလ်နဲ့လှမ်းပြီး သတိပေးခဲ့ရတဲ့အထိပါ။
လီယိုနာဒ်က "ကုရ်အာန်မှာ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးစကားလုံးတွေ ပါဝင်နေတယ်" လို့ရှင်းပြပါတယ်။ "ကုရ်အာန်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူကတော့ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများအား သားသတ်သမားလို နုတ်နုတ်ဆင်းပစ်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ သနားကြင်နာခြင်းကရုဏာကို ဖော်ပြကြပါတယ်။" လို့ အိမ်ဂျယ် ဆိုသူက ဖြည့်စွက်ပါတယ်။ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်၊ ရစ်ခ်ျမွန်က တစ်သက်လုံး ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးဝတ် ထားတဲ့ (သူကတော့ အမည်မဖော်ပြပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။) သူတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ဆီ စာရေးပြီး ဝန်ခံထားတာက - "မွတ်စလင်မ်ဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တော့ များများစားစားမသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားရဲ့ ကျမ်းစာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးဘာသာခြားများအားလုံး တစ်စည်းတစ်လုံးတည်းမိသားစုပုံစံနေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ နည်းနာတွေကို မသွန်သင်ထားဘူးဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။" အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး များများစားစားမသိပါဘူးလို့ ဝန်ခံထားပြီးမှ သူရဲ့ ကောက်ချက်မှာတော့ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ချယုံကြည်မှုတွေ စုပြုံထားပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် အခု ဝမ်းဒေါ်လာ မီလီယံမေးခွန်းကို မေးပါ့မယ်။ "Do critics actually read the Koran?" ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေ တကယ်ပဲ ကုရ်အာန်ကို ဖတ်ကြပါရဲ့လား ?
အဟုတ်တကယ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘီလ်မဟာရ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အမှန်တကယ်ဖတ်ရှုပါတယ်လို့ တင်ပြထားတဲ့သတင်းမျိုး ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ဒီလိုပြောလိုက် လို့ သူ့မှာ ကုရ်အာန်စာအုပ်မရှိဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီက ကွန်ဂရက်ထဲက ကိတ်အလီဆင်ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ သူ(ဘီလ်မဟာရ်)က ဆမ်ဟဲရစ်၊ သူ့ကိုပြောပြထားတဲ့ ကုရ်အာန် အကြောင်းကို တော်တော်များများ ကိုးကားသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူကိုယ်တိုင်ကုရ်အာန်ကို ဖတ်ပါတယ်လို့တော့ ဘယ်တော့မှ တိတိကျကျ မဖော်ပြပါ။ ကောင်းပါပြီ။ ဆမ်ဟဲရစ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ကုရ်အာန်ကို ဖတ်ထားပြီးဖြစ်ဖို့ လိုအပ်နေခဲ့ပါပြီ။ သူ့ရဲ့ ငြင်းခုံမှုတွေ အထမြောက်အောင်မြင်ဖို့ ကုရ်အာန်မုက္ခပါတ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဘယ်လိုများ ရွေးချယ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် ထောက်ပြပါသလဲ။ အာ.. ဒါမျိုးလုပ်တာက ပိုက်ဆံတွေဆီကနေ ထွက်ပြေးတာ မျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပီတာကင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က မွတ်စလင်မ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့များ တကယ်ပဲ သိကျွမ်းပါသလား? ဘရိုင်းဗစ်ကိစ္စကိုပဲကြည့်ပါ၊ သူနဲ့ ဘင်လာဒင်က ဝိသေသတစ်ခုတည်းကို အတူယူသွားကြပြီ။ နှစ်ယောက်လုံးက လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ပြီး ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သတ်လို့ တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ မတတ်ကျွမ်းသူတွေ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရေးသားချက်များကို ဆက်လက်ဖတ်ပေးပါအုန်း။ ကျွန်တော်ကတိပေးပါ။ ကျွန်တော် ဒီဝေဖန်ရေးသမားတွေကို ပြန်ပြီးဝေဖန်သွားမှာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကို လိပ်မူတင်ပြသွားမှာပါ။ ဝေဖန်ရေးသမားတွေကို တဘက်မှာထားပြီး ကနဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို ပြောရအောင်။ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူတွေက ဘာလို့ ကုရ်အာန်ဖတ်ဖို့ လိုနေတာတုန်း၊ ကုရ်အာန်ဖတ်ရွတ်ခြင်းကို သူတို့ ဘာလို့ ကရုစိုက်နေရမှာတုန်း?
ကောင်းပါပြီ။ အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်များကို နမူနာထားစဉ်းစားပါ့မယ်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတော့ သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆင်၊ ဂျော့ဘုရ်ှနဲ့ အိုဘားမားတို့ပေါ်လစီတွေက တော်တော်ကြီး ကွာကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသမ္မတအားလုံး ကုရ်အာန်ကို ဖတ်ဖူးကြပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးဖခင်ကြီး ဂျက်ဖာဆင်က သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကုရ်အာန်ကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုပဲဗျ။ ကွန်ဆာဗေးတစ် ရီပတ်ဘလီကန်ကြီး ဂျော့ဘုရ်ှက ကုရ်အာန်ကို တကယ့်အမြော်အမြင်လက်ဆောင်တွေလို့ ခေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်တဲ့ ဒီမိုကရက်ကြီး အိုဘားမားကတော့ ကလေးဘ၀ထဲက ကုရ်အာန်ကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ဖူးသူပါ။ ဂျက်ဖာဆင်၊ ဘုရ်ှ၊ အိုဘားမား - ဘာလို့သူတို့ကို နမူနာမယူကြတာတုန်း။
ပြဿနာက နက်ရှိုင်းလာပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ချာခ်ျကျောင်းတွေက အမေရိကန်မှာ မွတ်စလင်မ်တွေ ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ရာနှုန်းက ၅၀ အောက်မှာလို့ သတင်းပေးဖော်ပြပါတယ်။ ချာခ်ျတွေကပဲသတင်းပေးတာပါ၊ အမေရိကန်လူဦးရေတဝက်အောက်လောက်ကပဲ မွတ်စလင်မ်တွေ ကို ပုဂ္ဂလိက သိကျွမ်းကြတာပါလို့ စစ်တမ်းက ဖော်ပြနေပါတယ်တဲ့။ ကုရ်အာန့်ဥပဒေ၊ ရှရီယာကို ပိတ်ပင်ဖို့ အမေရိကန် ပြည်နယ်ပေါင်း ၁၇ ခုက တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ကုရ်အာန်အကြောင်း ဘယ်လောက်များများ ပမာဏက မသိဖြစ်နေမလဲ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲ ၃ ပုံ ၁ ပုံစာလောက်ရှိတဲ့ ပြည်နယ်တွေက ဒီကုရ်အာန်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးတို့အတွက် မသွန်သင်ပါဘူးလို့ စုပြုံပြောဆိုနေကြတဲ့ ပမာဏကလည်း အဲဒီလောက်ပါပဲ.... ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဒီလိုပြောဆိုမှုမျိုးနဲ့ အကျွမ်းတဝင်မှ ရှိရဲ့လား ?
နိုင်ငံတကာမှာ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အခြေခံမပြေလည်မှုတွေနဲ့ လူထုအတွက် ပညာရေး၊ ကြွေးမြီပြဿနာစတာတွေက တကယ့်ကို ခေတ်ထနေတဲ့ကိစ္စတွေပါ။ ဒါပေမယ့်မယ့်ဗျာ၊ (အမေရိကန်) ပြည်နယ်သုံးခုမှာ တစ်ခုက အခွန်ငွေတွေကို ကုရ်အာန်စာအုပ်မီးရှို့တဲ့နေရာမှာ အသုံး ချနေကြတယ်။ အံ့အားသင့်စရာပဲ။ အစ္စလာမ်သာသနာကို ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကနေ လေ့လာဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ ဘယ်နှဦးရှိပါသလဲ။ အကောင်းဘက်ကမြင်မယ်ဆိုရင်တော့၊ လက်လှမ်းမမီတာ လည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောဆိုတင်ပြတာမျိုးမရှိလို့ လည်းဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကတော့ ဒီမေးခွန်းပါပဲ။ ဂူးဂဲလ်ဆိုတာကို လူတိုင်းကြားဖူးပါသလား။ ဒီမှာ ကုရ်အာန် အခမဲ့ကော်ပီတစ်ခုပါ။
ဘာမှမရှိတော့ရင်လည်း ရွှေဥပဒေကြီး(golden rule) တော့ အဓွန့်ရှည်ပါစေ။ မွတ်စလင်မ်တွေ ကတော့ ဘိုင်ဘဲလ်လည်းဖတ်သလို၊ တိုရာကိုလည်းဖတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ (ကုရ်အာန်မတိုင်မီ) အရင်က ကျမ်းစာတွေမှာလည်း အမှန်တရားပါဝင်ပါလား ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဆန်းစစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာဖို့ ဘိုင်ဘဲလ်နဲ့ တိုရာတစ်စုံစီရှိပါတယ်။ အခု မွတ်စလင်မ်တွေ အကြောင်း ပြောကြည့်ရအောင် -
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပဲ၊ ဝေဖန်သူတွေက ကုရ်အာန်မှာ အမုန်းတရားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေ တယ်လို့ချည့် ပြောနေကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေက အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့။ သူတို့ထုတ်ပြတဲ့ ကုရ်အာန် မုက္ခပါတ်က "ထို(မယုံကြည်သူတို့အား) တွေ့ရာနေရာ၌ သတ်ပြစ်ကြ" (၂.၁၉၂) သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖြတ်ညှပ်ပြီး လိုရာဆွဲတင်ပြ ထားတဲ့ ကိစ္စလို့ ပြောပြရင်တော့ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေ က လှောင်ပြောင်နေကြပါဦးမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါမှာမဆို ဘယ်တိုင်းပြည်က ဘယ်တရားရုံးက အဘယ်ကဲ့သို့သော တရားသူကြီးဖြစ်နေပါစေ၊ ဥပဒေကို ဖွင့်ဆိုရာမှာ ဖြတ်ညှပ် ကပ် မဖြစ်စေပဲ အားလုံးအပေါ်မှာ လွှမ်းပြီးယူတတ်စေဖို့ အရေးကြီးကြောင်း အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ ရှင်းလင်းပြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုသတိချပ်ရမှာက ကုရ်အာန်ကလည်း ဥပဒေကျမ်းတစ်စောင်ဆိုတာ ကိုပါ။
၂.၂၉၂ မတိုင်မီလာရှိတဲ့ မုက္ခပါတ်မှာ ဖော်ပြထားတာက - "ထို့ပြင်တဝ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် ၏ လမ်းတော်၌ အသင်တို့ကို (စတင်) စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်သူတို့နှင့် ပြိုင်ဆိုင် တိုက် ခိုက်ကြကုန်လော့။ သို့ရာတွင် (ဤသို့တိုက်ခိုက် ရာ၌) အသင်တို့သည် (မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ) မကျူး လွန်ကြကုန်လင့်။ ဧကန်မုချ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် သည် ကျူးလွန်သူတို့ကို နှစ်သက်တော် မူသည် မဟုတ်ချေ။" (၂.၁၉၁) ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမုက္ခပါတ်မှာ သတ်မှတ်ထားတာက စစ်ဆို တာ ခုခံဖို့ပဲ၊ စတင်ကျူးကျော်ဖို့မဟုတ်ဆိုတာပါ။ ၂.၁၉၂ ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုရင် ဖော်ပြထားတာက "ထိုမယုံကြည်သူတို့က အသင်တို့အားနှင်ထုတ်သကဲ့သို့ အသင်တို့သည်လည်း ထိုမယုံကြည်သူတို့ အားနှင်ထုတ်ကြကုန်။ အမှန်သော်ကား (သာသနာရေး၌) ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက် နှောင့်ယှက်ခြင်းသည် သတ်ဖြတ် ခြင်းထက်ပင် ပိုမို၍ဆိုးရွားလှ၏။ " ဒါက မိမိရဲ့ရ ပိုင်ခွင့်ကို ပြန်ပြီးတောင်းဆိုဖို့ဆိုတဲ့ အချက်ကို ရှင်းပြနေပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ မုက္ခပါတ်မှာ ခုခံစစ်ဆင်နွှဲဖို့ ခွင့်ပြုထားပြီး နောက်ဆက်တွဲလာရှိတဲ့ မုက္ခပါတ်များ (၂.၁၉၃-၁၉၄) တွေမှာတော့ မွတ်စလင်မ်တွေကို သူတို့ရဲ့ ရန်သူက တိုက်ခိုက်ခြင်းရပ်ဆဲလိုက်တာနဲ့ သူတို့လည်း ရပ်ဆဲပြစ်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဖော်ပြထားတာက " သို့ရာ တွင် အကယ်စင်စစ် ထိုသူတို့သည် စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက် ခြင်းကို ရပ်စဲကြပါမူ၊ ကျူးလွန်နှိပ်စက် ညှင်းပန်းသူ တို့မှတစ်ပါး အခြားသူတို့၏အပေါ်ဝယ် မည်သို့မျှ ကျူးကျော်စော်ကား(တုံ့ပြန် သတ်ဖြတ်)ရန် အကြောင်းမရှိပေ။"
ဒီနည်းနာကိုပဲ ကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံးမှာ အထပ်ထပ်အခါခါလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ အချက်အလက် များအရတော့ ၂၂.၄၀ မှာ စစ်စည်းကမ်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ "တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေကြရသော (မွတ်စ်လင်မ်)တို့သည် (ခုခံတိုက်ခိုက်)ခွင့် ရရှိလေပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ၎င်းတို့သည် နှိပ်စက်ညှဉ်း ပန်းခြင်းကို ခံခဲ့ကြရလေသည်။" အဲဒီ​နောက် ၂၂.၄၁ မှာ ဖော်ပြတာက ဘာသာသာသနာတိုင်းရဲ့ ဘုရားပုထိုး၊ ဝတ်ပြုရာကျောင်းဆောင်တွေကို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ယူနီဗာဆယ် ဘာသာရေးလွတ် လပ်ခွင့်အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ ကာကွယ်ခိုင်းထားတာပါ။ ဘာလဲ၊ ဒါမျိုး တွေက သည်းမခံတတ်တဲ့ အမုန်းတရားတွေပဲလားဗျာ။
ဒီလမြတ်ရာမ်ဇာန်မှာ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မုက္ခပါတ်များထဲက ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ပို့ချခြင်းခံရတဲ့ ၉၆.၂ ထဲက အစ်ကရ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကြည့်ကြရအောင်။ အစ်ကရဆိုတာ ဖတ်လော့၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီကနေ ဆက်သွား ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဝေဖန်ရေးဆရာသမားကြီးတွေ ကိုးကားတင်ပြထား တဲ့ မုက္ခပါတ်တိုင်း (အနုတ်လက္ခဏာအဓိပ္ပါယ်ထွက်စေဖို့ကိုးကားကြခြင်းဖြစ်)မှာ ရှင်းလင်းပြီး အချက်ကျတဲ့ တင်ပြမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျိန်းသေသဘောပေါက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ကုရ်အာန်ကို အစ်ကရ ထားဖို့ လိုတာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီနောက်မှ ခင်ဗျားအနေနဲ့ စုတုပြုတော့ပေါ့။
ကာစင် ရရှီဒ် ၏ ဝါရှင်တန်ပို့စ်ပါ ဆောင်းပါး အား ဆီလျော်သလိုမြန်မာမှုပြုပါသည်။ Qasim Rashid is an American-Muslim human rights activist, writer andafrequent lecturer on American-Islamic issues.
အာရေဗျဈေးကွက်အတွက် Facebook ပေါ်မှာ အင်ရှာအလ္လာဟ်ခလုတ်ကလေးများ တပ်ဆင်
Facebook က သူတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်ကို ပြောင်းလဲမှုအများအပြားပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ အတိုင်း ဒူဘိုင်းမှာ ရုံးခွဲဖွင့်ပြီးတဲ့နောက် အာရပ်ဈေးကွက်နဲ့သင့်တော်မယ့် ပထမဆုံးအပြောင်းအလဲကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ်ကနေစပြီးတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နဲ့ မြောက်အာဖရိကမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲနေကြသူများအတွက် အခမ်းအနားဖိတ်ကြားချက်ကလေးတွေ ကို တုန့်ပြန်ရာမှာ "အင်ရှာအလ္လာဟ်" ဆိုတဲ့ တုန့်ပြန်မှုမျိုးကို "Join, Maybe, Decline" တို့နဲ့အတူ ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ရဲ့ အာရေဗျဒေသဆိုင်ရာ မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မာဂျစ်ဂျော်ဆင်က "ဒါကတော့ ဒေသတ ဝှမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ စူးစမ်းလေ့လာရေးအုပ်စုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်ကလေးပါ။ အင်ရှာအလ္လာဟ် ခလုတ်ကလေးကို တော်တော်ကြာကြာကပဲ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။" ဟု ပြောကြားခဲ့ သည်။
ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွက် ပလက်တီနမ်အပြောင်းအလဲအစီအစဉ်ကိုလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်အာရေဗီးယား က ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ရဲ့ အထူးလေ့လာမှုအုပ်စုထဲမှာ ဒါကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပလက်တီနမ် မှာတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကို တစိုက်မတ်မတ်သုံးစွဲသူများအတွက် ပရီမီယံရွေးချယ်မှုတွေပါရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ အကောင်းဆုံးပြောဆိုသူ၏ဝေါလ်၊ ၂၄ နာရီ စောင့်ကြည့်ပြီး status message တင်နိုင်သူစတဲ့ ကြယ်ငါးပွင့်ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကြိမ်မှာ အသုံးပြုသူအယောက် ၅၀ အတွက် နေရာလပ်တွေကို ဖန်တီးထားပါသေးတယ်။" ဟု ဂျွန်ဆင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ပလက်တီနမ်ကို လာမည့်နိုဝင်ဘာတွင် လွှင့်တင်မည်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၊ သာသနာရေးတက္ကသိုလ်၏ ပထမဦးဆုံးသော ဘွဲ့နှင်းသဘင်
ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၊ သာသနာရေးတက္ကသိုလ်၏ ပထမဦးဆုံးသော ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းကို အင်္ဂလန် အရှေ့ တောင်ဘက် ဆာရေးဒေသရှိ ဟိုင်ဇလ်မီးယားမြို့တွင်တည်ရှိသော အဆောက်အဦသစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ အခမ်းအနားကို အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝိညာဉ်ရေးရာ ခေါင်းဆောင် ပဉ္စမမြောက် ခလီဖတွလ်မဆီဟ်က ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် အောင်မြင်သူ ၂၃ ဦးအား ဟာဇရသ်မီရ်ဇာမဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ်၊ ပဉ္စမမြောက် ခလီဖတွလ်မဆီဟ်သခင်က ရှာဟီဒ်ဘွဲ့များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထိုဘွဲ့ရသူများမှာ အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ တရားဝင်သာသနာပြုများအဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းကာ သာသနာ့တက္ကသိုလ်တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ခလီဖာသခင်ကြီးက အမြော်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံလှသည့် မိန့်ခွန်းကို မိန့်ချွေတော်မူကာ ဘွဲ့ရ သာသနာပြုများကို ၎င်းတို့၏များပြားလှသောတာဝန်၀တ္တရားများအကြောင်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ သည်။ သခင်ကြီးက ဘွဲ့ရများအား သူတို့အနေဖြင့် ဥရောပတွင်တည်သော ဂျာမေအာ(သာသနာ့တ က္ကသိုလ်)မှ ပထမဆုံးဘွဲ့ရကျောင်းသားများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ နောင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၊ ဘွဲ့ရသာသနာပြုများအတွက် စံပြသရုပ်များဖြစ်နေရန်လိုကြောင်း ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။
သခင်ကြီးက "အသင်တို့အနေနဲ့ အမြဲမှတ်သားထားရမှာက အဟ်မဒီသာသနာပြုတစ်ဦးရဲ့ အပြုအမူနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများဆီကနေ အခြားသူများကို အကူအညီဖြစ်စေရမယ်၊ အကျိုးကျေးဇူးရယူနိုင်စေရမယ် ဆိုတာပါပဲ။" ဟု မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
သခင်ကြီးက ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအနေဖြင့် ယခုဘွဲ့ရမှုမှာ သာသနာ့ပညာရေး၌ ပြီးပြည့်စုံမှုတစ်ခုမ ဟုတ်သေးကြောင်း၊ အမှန်တကယ်တွင်မူ ၎င်းတို့၏ပညာရေးမှာယခုအချိန်မှ စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။
သခင်ကြီးက ဘွဲ့ရများအနေဖြင့် အမှန်တကယ်အောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ တော်ပါး၌ မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွယ်ကပ်နေခြင်းဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့စိတ်အတွင်း အဇ္ဈတ္တကို ကျိုးနွံခြင်းအတိပြီးစေဖို့ လိုအပ်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူသည်။
သခင်ကြီးမိန့်တော်မူသည်မှာ - " ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို အသင်တို့အနေနဲ့ အပြီးပြည့်စုံဆုံးသော သူများ အဖြစ်မထင်မှတ်ကြပါနဲ့။ မိမိတို့ကိုယ်ကို အဆင့်မြင့်ပညာတတ်ကျွမ်းတယ်ဆိုပြီးလည်း မသုံးသပ်ကြ ပါနဲ့။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာတော့ အပြီးပြည့်စုံဆုံးသော လူသားဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းသာရှိပြီး ထိုသူကတော့ တမန်တော်မြတ်မဟာ မုဟမ္မဒ်(ဆွ)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ကြီး(ဆွ)၏ ဥပမာကိုသာ အသင်တို့အနေနဲ့ စံထားအတုယူလိုက်နာရပါမယ်။ "
သခင်ကြီးက ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ၏ အနာဂတ်တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းကို ဆွေးနွေးရာ၌ ၎င်းတို့၏မှန်ကန်သောရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘ၀တစ်လျောက်လုံး အစ္စလာမ်သာသနာကို အလုပ်အကျွေး ပြုရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသည်ကို အမြဲသတိရနေဖို့လိုအပ်ကြောင်း မှာကြားတော်မူ သည်။
ဥရောပတွင် ဘွဲ့ရခဲ့၍လည်း ဘွဲ့ရများအနေဖြင့် အနောက်နိုင်ငံရှိ လူသားများနှင့် လွတ်လပ်ပွင့် လင်းစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သလို ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို လည်း နားလည်သဘောပေါက်ခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ပြောကြားတော်မူသည်။
သခင်ကြီးက အဟ်မဒီသာသနာပြုတိုင်းမှာ ခေတ်အခါ၏ ခေလာဖသ်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် မိမိတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် စံပြသရုပ်များဖြစ်နေရမည့်အကြောင်းလည်း သတိပေး ဆုံးမ တော်မူခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ရဲ့ သာသနာပြုများကို အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးက လေးစားလိုက်နာမှုရှိကြကြောင်း၊ ထိုသည်ကို ယခုဘွဲ့ရကျောင်းသားများ သိရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အသင်တို့အနေဖြင့် မှတ်သားရမည်မှာ ထိုလေးစားလိုက်နာမှုများမှာ ပုဂ္ဂလအောင်မြင်မှုများကြောင့်မဟုတ် ဆိုသည် ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသည်မှာ အဟ်မဒီများက မဆီဟ်သခင်ကြီး (အ) နှင့် သခင်ကြီး၏အသင်း အဖွဲ့အပေါ် ထားရှိသည့် ချစ်ကြည်မြတ်နိုးစိတ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အသင်တို့ရရှိသော လေးစားမှုများနှင့် အသိအမှတ်ပြုမှုများမှာ မဆီဟ်သခင်ကြီး(အ)၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်ကြောင့် ပင်ဖြစ်ကြောင်း" မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
မဆီဟ်မဟ်ဒီ၏ ရေးသားချက်များအပေါ် စောဒကနှင့် အဖြေများ
ကတိတော်လာမဆီဟ်နှင့် မဟ်ဒီဘွဲ့ခံအရှင်သူမြတ် ဟာဇရသ် မီရ်ဇာဂူလာမ်အဟ်မဒ် (အ)၏ ရေးသားချက်များအပေါ် စောဒကတက်လေ့ရှိကြသည့် ယေဘုယျအချက်များကို ရှင်းလင်းချက် အဖြေများနှင့်တကွ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
Expand ကို ကလစ်နှိပ်၍ အကျယ်ချဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အစ္စလာမ့်ခလီဖာ၏ ဂျာမနီနိုင်ငံနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင် မြွက်ကြားခဲ့သည့် နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်း
အစ္စလာမ့်ခလီဖာ ဟာဇရသ်အမီရ်ရွလ်မို့အ်မီနီးန်၊ ခလီဖတွလ်မဆီဟ်၏ ဂျာမနီနိုင်ငံ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် မြွက်ကြားတော်မူခဲ့သည့် နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်း
၂၀၁၂ခုနှစ် ဂျာမနီဂျလ်ဆာ နောက်ဆုံးနေ့မြင်ကွင်း
Expand ကို ကလစ်နှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အစ္စလာမ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လက်ကမ်းစာစောင်
အစ္စလာမ်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လက်ကမ်းစာစောင်အား လက်ဆင့်ကမ်း ဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်ဆက်အပ်ပါ သည်။ expand နှိပ်၍ zoom ဆွဲကြည့်ပါ။
အမေရိကန်၏ ပထမဆုံးမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်း - အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံသို့ ငြိမ်းချမ်းရေး မြှင့်တင်ရန် အစ္စလာမ့်ခလီဖာ တက်ရောက်မည်
ဇွန်လ ၈ ရက် ၂၀၁၂
ယခုလ၏ နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်တွင် အစ္စလာမ့်ခလီဖာဖြစ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဟ်မဒီယာ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင် ဟာဇရသ်မီရ်ဇာ မဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ် အမေရိကန်နိုင်ငံ သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့မှ ကြေငြာထား သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ ဝိညာဉ်ရေးရောခေါင်းဆောင် ဟာဇရသ်မီရ်ဇာ မဆ်ရူးရ်အဟ်မဒ်
ထောင်ပေါင်းများစွာသော အမေရိကန်မွတ်စလင်မ်များကလည်း သခင်ြကီးလာရောက်မည့်အရေးကို စောင့်မြှော်နေကြကြောင်း သိရသည်။ သခင်ကြီးမှာ မွတ်စလင်မ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေ ဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာထဲမှ နောက်လိုက်လူဦးရေအများဆုံးသော အဖွဲ့အစည်း၏ ခေါင်းဆောင် လည်း ဖြစ်သည်။
သခင်ကြီးအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့မသွားရောက်မီကတည်းက ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြ သော သမ္မတအိုဘာမား၊ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နတန်ယာဟုနှင့် အီရန်သမ္မတ အာမာဒီနီဂျက်တို့ထံ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သဝဏ်လွှာများ ပါးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သခင်ကြီးက ထိုကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအား နိုင်ငံတကာကွဲပြားခြားနားချက်များအတွက် နားလည်မှု ရှိရှိ စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သာ အဖြေရှာသင့်ကြောင်း၊ တတိယကမ္ဘာစစ်ကို ဦးတည်စေမည့် အင်အားသုံး ဖြေရှင်းခြင်းကို အစွမ်းကုန်ရှောင်ရှားသင့်ကြောင်း အကြံပေးတင်ပြခဲ့သည်။
သခင်ကြီးအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာစဉ် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အမေရိကန် မွတ်စလင်မ်များသာမက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အရေးပါသော အစိုးရခေါင်းဆောင်များနှင့်ပါ တွေ့ဆုံသွားရန်ရှိကြောင်း၊ သို့အားဖြင့် အဆက်အဆံကိုတိုးမြှင့်စေမည်သာမက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူသားထုတစ်ရပ်လုံး တရားမျှတမှုရရှိစေရေးတို့အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှုမှတ်စိစစ်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့မှ တရားဝင် ကြေငြာချက်ထုတ် ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုကြေငြာချက်အရ သခင်ကြီးမှာ ကပ္ပီတလ်တောင်ကုန်း၊ Rayburn House Office Building ၌ ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပါတီပေါင်းစုံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အထူးဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနား၌ "ငြိမ်းချမ်းရေးခြင်း အတွက် နည်းလမ်း-နိုင်ငံများအကြား အဆက်အဆံ" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မိန့်ခွန်းမြွက်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုအခမ်းအနားတွင် Tom Lantos လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဘာသာသာသနာများ လွတ်လပ်ခွင့်ကော်မရှင် (USCIRF) တို့၏ ပူးပေါင်းတင်ဆက်မှု ဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီခေါင်းဆောင် နန်စီ ပီလိုစီမှ အဖွင့်စကားပြောကြားမည်ဖြင့်ပြီး အမေရိကန် ဆီနိတ်အမတ် ရောဘတ်ကေစီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသော ဖရန့်ဝုလ်ဖ်၊ မိုက်ဟွန်ဒါနှင့် ကိတ်အလိဆန်တို့မှလည်း မှတ်ချက်စကားများ ပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးမှ ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်များ၊ သံအမတ်ကြီးများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းခေါင်းဆောင် များ နှင့် အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များလည်း တက်ရောက်လာကြမည်ဟု သိရသည်။
ထို့ပြင် သခင်ကြီးမှာ ပန်ဆီလ်ဗေးနီးယားတွင် ဇွန်လ ၂၉ မှ ဇူလိုင် ၁ အထိကျင်းပမည့် အမေရိကန်၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၏ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကို တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရှေးအကျဆုံး မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်း၏ အခမ်းအနားလည်းဖြစ်၍ ယင်းနှစ်ပတ် လည်ညီလာခံသို့ အမေရိကန်မွတ်စလင်မ်ပေါင်း ၁သောင်း ၂ထောင်ခန့်နှင့် မွတ်စလင်မ် မဟုတ်သူ ဧည့်သည် ၁ ထောင်ခန့် တက်ရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့သည် အစ္စလာမ်သာသနာကို မူရင်းအစစ်အမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဖြစ် ထွန်း ပေါ်ပေါက်စေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ လျင်မြန်စွာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လျက်ရှိပြီး အသင်း ဝင်များမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ တွင် ၁၆၀ မီလီယံအရေအတွက် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ကို ၁၉၂၀တွင်စတင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သော မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်သည်။
အီဂျစ်အာဏာရှင် မူဘာရက်အား ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
June 06, 2012 admin No comments
ဇွန်လ ၂ ရက် ၂၀၁၂
ကိုင်ရို - အီဂျစ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများအား သတ်ဖြတ်ရာတွင် ကဏ္ဍတစ်ရပ်မှ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံအား နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးအုပ် ချုပ်ခဲ့သည့် အီဂျစ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဟို့စ်နီမုဘာရက်ကို ပြီးခဲ့သည့်စနေ နေ့က ထောင်ဒဏ်တစ် သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်လိုက်သည်ဟု ဂျော်ဒန်တိုင်းမ်က ဖော်ပြသည်။ ဤ သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ အာဏာရှင်များအတွက် ဥပမာတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်းလည်း အဆိုပါ သတင်းက ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် အချို့သော အီဂျစ်ပြည်သူများကမူ မူဘာရက်အပေါ်ထိုသို့သောဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခဲ့အပြီး လမ်းများပေါ်သို့ထွက်လာကာ မိမိတို့၏ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ကြသည်။ အချို့က မူဘာရက်ကို သေဒဏ်ပေးရန်အလိုရှိနေသည်။ အချို့ကမူ ဤသို့သက်ညှာစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် မူဘာရက် လက်ထက်က အခြားနိုင်ငံရေးသမားများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ ၎င်းတို့၏အယူခံဝင်မှုများ ကြောင့် အပြစ်ဒဏ်ခံစားရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသွားလိမ့်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။
၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီက အီဂျစ်ပြည်သူများသည် အသက် ၈၄ နှစ်အရွယ်၊ အာဏာရှင်မူဘာရက်ကို ကိုင်ရိုရှိ တာဟ်ရီရ်ကွင်းပြင်၌ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အလက်ဇန္ဒီးယားတွင်လည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြ သည်။
မူဘာရက်အတွက် တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် လွတ်လပ်သောရွေး ကောက်ပွဲရလဒ်များထွက်ပေါ်မလာမီ နှစ်ပတ်အလိုတွင် ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုရွေးကောက်ပွဲတွင် မွတ်စလင်မ်ဘရားသားဟုဒ်ပါတီက ရေပန်းစားလျက်ရှိသည်။
မူဘာရက်သည် တရားခွင်သို့ ဘီးတပ်လှည်းဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ သားနှစ် ဦးဖြစ်သည့် အလားနှင့် ဂမားလ်တို့အပါအဝင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟဘစ် အလ် အဒ္ဒလီနှင့် အခြားလုံခြုံရေးအရာရှိများလည်း ပါဝင်သည်။
ဟို့စ်နီမူဘာရက်အား သတ်ဖြတ်မှုများအတွက်လည်းကောင်း၊ သတ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားမှုများအတွက် လည်းကောင်း တစ်သက်တစ်ကျွန်းထောင်ဒဏ်ချမှတ်ကြောင်း တရားသူကြီး အဟ်မဒ် ရီဖာအတ်က ကြေငြာခဲ့သည်။
တရားသူကြီးက အလ် အဒ္ဒလီကိုလည်း ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ချမှတ်ခဲ့သော်လည်း အခြားသော လုံခြုံ ရေးအရာရှိ ခြောက်ဦးကိုမူ ပြစ်မှုမထင်ရှား၍ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် အသက် ၃၀ နှစ်အရွယ် ကိုင်ရိုမြို့နေ အဟ်မဒ် ရာအုဖ်က "မူဘာ ရက် တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်တာဟာ သင့်တော်ပါတယ်။ အသက် ၈၀ ကျော်နေပြီဖြစ်တာ ကြောင့် သူ့အတွက် ဒီပြစ်ဒဏ်ဟာ ခက်ခဲနိုင်သလို ကျန်ရှိတဲ့ဘ၀တစ်သက်တာလုံးကိုလည်း ထောင် ထဲမှာပဲ နေသွားရတော့မှာပါ။" ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် မွတ်စလင်ဘရားသားဟုဒ်ပါတီကမူ မူဘာရက်အပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်အား ပြင်ဆင်ပေးရန် လိုလားနေသည်။
"ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်က ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လုံလောက်တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေကို စုစည်းခဲ့ခြင်း တာဝန်ယူခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး" ဟု မွတ်စလင်ဘရားသားဟုဒ်မှ စည်းရုံးရေးနှင့် ပြောရေးဆိုခွင့်တာဝန်ခံ ယဆီးရ်အလီက ပြောကြားသည်။
မူဘာရက်အစိုးရလက်အောက်၌ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဆန္ဒပြသူများထဲတွင် ရက် ၁၈ ရက်အတွင်းလူပေါင်း ၈၅၀ ခန့်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။
သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူများ၏ ရှေ့နေများကမူ ဤဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ပတ်သတ်၍ ဒေါသထွက်နေသည့် လူထု အား ငြိမ်သက်စေရန် ဆောင်ရွက်ချက်မျှဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်က မူဘာရက်နှင့် အပေါင်း အပါများကို အယူခံဝင်ဖို့ တံခါးဖွင့်ပေးထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
source : http://goo.gl/W9Z6y
အာရေဗျဈေးကွက်အတွက် Facebook ပေါ်မှာ အင်ရှာအလ္လာဟ်ခ...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့၊ သာသနာရေး...
အမေရိကန်၏ ပထမဆုံးမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်း - အဟ်မဒီယာမွ...